GỤỌ NKE Acholi Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mexican Sign Language Mixe Mongolian Moore Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Yoruba Zande Zapotec (Isthmus)
Gịnị mere anyị ji kwesị iṅomi Jizọs?
Olee otú ị ga-esi dị umeala n’obi ka Jizọs?
Olee otú ị ga-esi na-enwe ọmịiko ka Jizọs?
1. Gịnị mere iṅomi Jizọs ga-eji mee ka anyị bịarukwuo Jehova nso?
ANYỊ na-eṅomikarị ndị àgwà ha masịrị anyị. N’ime ndị niile birila n’ụwa a, ọ bụ Jizọs Kraịst ka anyị kwesịrị iṅomi karịchaa. Maka gịnị? Jizọs kwuru, sị: “Onye hụrụ m ahụwokwa Nna m.” (Jọn 14:9) Otú Jizọs si ṅomie àgwà Nna ya mere ka ịhụ Jizọs dị nnọọ ka ịhụ Nna ya. N’ihi ya, anyị ṅomie Jizọs, anyị ga-abịarukwu Jehova, bụ́ Onye kacha ihe niile elu, nso. Iṅomi Ọkpara Chineke bụ ihe ùgwù na-enweghị atụ.
2, 3. (a) Gịnị mere Jehova ji mee ka e dee ihe ga-enyere anyị aka ịmata Ọkpara ya? Gịnịkwa ka ọ chọrọ ka anyị mee? (b) Olee ihe anyị ga-atụle n’isiokwu a nakwa na nke na-esonụ?
2 Ma, olee otú anyị ga-esi mata ụdị onye Jizọs bụ? Obi dị anyị ụtọ na Jehova mere ka e dee gbasara ya n’Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst. Ihe mere o ji mee otú ahụ bụ na ọ chọrọ ka anyị mata onye Ọkpara ya bụ, ka anyị nwee ike iṅomi ya. (Gụọ 1 Pita 2:21.) Baịbụl ji ihe nlereanya Jizọs nyere anyị tụnyere “nzọụkwụ.” Ọ dị ka à ga-asị na Jehova na-agwa anyị ka anyị na-eso Jizọs n’azụ, ebe ọ zọnyere ụkwụ, anyị azọnye. N’eziokwu, Jizọs zuru okè, ma anyịnwa ezughị okè. Jehova anaghịkwa atụ anya na anyị ga-eṅomi Jizọs n’emehieghị. Kama, ọ chọrọ ka anyị gbalịsie ike na-eṅomi Ọkpara ya.
3 Ka anyị tụlee ụfọdụ àgwà ọma Jizọs nwere. N’isiokwu a, anyị ga-eleba anya n’otú o si dị umeala n’obi, nweekwa ọmịiko. Na nke na-esonụ, anyị ga-atụle otú o si nwee obi ike na nghọta. Anyị tụlewe àgwà nke ọ bụla, anyị ga-aza ajụjụ atọ ndị a: Gịnị ka ọ pụtara? Olee otú Jizọs si kpaa àgwà ahụ? Olee otú anyị ga-esi ṅomie ya?
JJIZỌS DỊ UMEALA N’OBI
4. Gịnị ka ịdị umeala n’obi pụtara?
4 Gịnị ka ịdị umeala n’obi pụtara? Ọtụtụ ndị n’ụwa a dị mpako. Ha na-ewerekwa onye dị umeala n’obi ka onye na-adịghị ike ma ọ bụ onye na-enweghị obi ike. Ma, ọ bụghị eziokwu. Onye dị umeala n’obi dị ike, nweekwa obi ike. Ọ dịghị mpako, ọ naghịkwa eche na ya ka ndị ọzọ. N’Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst, otú ọzọ e nwere ike isi sụgharịa “ịdị umeala n’obi” bụ “ịdị nwayọọ n’obi.” (Fil. 2:3) Ihe mbụ ga-egosi ma ànyị dị umeala n’obi bụ otú anyị si ele onwe anyị anya. Otu akwụkwọ nke na-akọwa Baịbụl kwuru na onye dị umeala n’obi ma na e nweghị ihe ọ bụ ma e jiri ya tụnyere Chineke. Ọ bụrụ na anyị dị umeala n’obi, anyị agaghị na-eche na anyị ka ndị ọzọ. (Rom 12:3) Ọ naghị adịrị ụmụ mmadụ na-ezughị okè mfe ịdị umeala n’obi. Ma, anyị ga-amụtali ịdị umeala n’obi ma ọ bụrụ na anyị na-echebara otú Chineke si dị ukwuu echiche ma na-eso nzọụkwụ Ọkpara ya.
5, 6. (a) Ònye bụ Maịkel onyeisi ndị mmụọ ozi? (b) Olee otú Maịkel si gosi na ya dị umeala n’obi?
5 Olee otú Jizọs si gosi na ya dị umeala n’obi? O nweghị mgbe Ọkpara Chineke na-adịghị umeala n’obi, ma mgbe ọ nọ n’eluigwe ma mgbe ọ bụ mmadụ zuru okè n’ụwa. Ka anyị tụlee ihe ụfọdụ o mere.
6 Otú o si eche echiche. Jud, bụ́ onye so dee Baịbụl, dere banyere ihe Jizọs mere tupu ọ bịa n’ụwa. (Gụọ Jud 9.) Jud kpọrọ Jizọs Maịkel onyeisi ndị mmụọ ozi, ma kwuo na e nwere mgbe ya na Ekwensu “sere okwu ma na-arụrịta ụka banyere ozu Mozis.” I chetaranụ na mgbe Mozis nwụrụ, Jehova liri ya n’ebe onye ọ bụla na-amaghị. (Diut. 34:5, 6) O nwere ike ịbụ na Ekwensu chọrọ iji ozu Mozis mee ka ndị Izrel kpeere arụsị. Ihe ọ sọkwara ya bụrụ ihe Ekwensu bu n’obi, Maịkel ekweghị ya. Otu akwụkwọ kwuru na a na-eji okwu Grik e si sụgharịta “sere okwu ma na-arụrịta ụka” akọwa ‘okwu mmadụ na ibe ya ji gaa ụlọikpe.’ O nwere ike igosi na ‘Maịkel gwara Ekwensu hoo haa na o kwesịghị iburu ozu Mozis.’ Ma, onyeisi ndị mmụọ ozi ghọtara na ọ bụghị ya kwesịrị ikpe Ekwensu ikpe. Kama, o wegaara Jehova, bụ́ Onyeikpe Kacha Elu, okwu ahụ. Maịkel si otú ahụ gosi na ya achọghị ime ihe Jehova na-enyeghị ya ikike ime, ọ bụrụgodị na a kpasuru ya iwe. Ihe ahụ o mere gosiri na ọ dị umeala n’obi.
7. Olee otú ihe Jizọs kwuru na ihe ndị o mere si gosi na ọ dị umeala n’obi?
7 Mgbe Jizọs nọ n’ụwa, ihe ndị o kwuru na ihe ndị o mere gosiri na ọ dị umeala n’obi. Okwu ya. O meghị ka ndị mmadụ towe ya. Kama, o mere ka e towe naanị Nna ya. (Mak 10: 17, 18; Jọn 7:16) O nweghị mgbe ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya okwu ga-eme ka ha yie ndị nzuzu. Kama, ọ kwanyeere ha ùgwù, jaa ha mma maka ihe ọma ha mere, meekwa ka ha ghọta na ọ tụkwasịrị ha obi. (Luk 22:31, 32; Jọn 1:47) Omume ya. Jizọs ebighị ndụ okomoko, o nweghịkwa ọtụtụ ihe. (Mat. 8:20) O ji obi ya niile rụọ ọrụ ndị ohu na-arụ. (Jọn 13:3-15) O rubeere Chineke isi ma gosi na otú o si dị umeala n’obi enweghị atụ. (Gụọ Ndị Filipaị 2:5-8.) Ndị dị mpako anaghị achọ irube isi. Ma, Jizọs emeghị ka ha. O ji obi ya niile mee ihe Chineke chọrọ ka o mee, “rube isi ruo ọnwụ.” O doro anya na Jizọs, bụ́ Nwa nke mmadụ, dị “umeala n’obi.”—Mat. 11:29.
ṄOMIE OTÚ JIZỌS SI DỊ UMEALA N’OBI
8, 9. Olee otú ị ga-esi egosi na ị dị umeala n’obi?
8 Olee otú anyị ga-esi na-adị umeala n’obi ka Jizọs? Otú anyị si eche echiche. Ịdị umeala n’obi na-eme ka anyị ghara ime ihe a na-enyeghị anyị ikike ime. Ọ bụrụ na anyị echeta na e nyeghị anyị ikike ikpe ndị mmadụ ikpe, anyị agaghị na-akatọ ndị ọzọ n’ihi ihe ha mejọrọ ma ọ bụ nyowe ha enyo. (Luk 6:37; Jems 4:12) Ịdị umeala n’obi na-eme ka anyị ghara ‘ịbụ ndị ezi omume gabiga ókè,’ ma ọ bụ na-eleda ndị na-enweghị ihe ùgwù ndị anyị nwere anya. (Ekli. 7:16) Ndị okenye dị umeala n’obi anaghị eche na ha ka ụmụnna ndị ọzọ. Kama, ha ‘na-ewere na ndị ọzọ ka ha,’ na-ewerekwa onwe ha ka ndị ka nta.—Fil. 2:3; Luk 9:48.
9 Chegodị banyere Nwanna Thorn. E mere ya onye nlekọta na-ejegharị ejegharị n’afọ 1894. Mgbe ọ rụrụ ọrụ ahụ ọtụtụ afọ, a kpọrọ ya ka ọ gaa rụwa ọrụ n’Ugbo Alaeze dị n’ebe ugwu Niu Yọk. E nyere ya ọrụ n’ebe a na-azụ ọkụkọ. O kwuru, sị: “Mgbe ọ bụla isi malitere ibu m, m na-agwa onwe m, sị: ‘Obere ihe dị ka gị, gịnị ka i nwekwaranụ mere isi ga-eji na-ebu gị?’” (Gụọ Aịzaya 40:12-15.) Ihe a gosiri na ọ dị umeala n’obi.
10. Olee otú okwu anyị na omume anyị ga-esi egosi na anyị dị umeala n’obi?
10 Okwu anyị. Otú anyị si ekwu okwu ga-egosi ma ànyị dị umeala n’obi. (Luk 6:45) Mgbe anyị na ndị mmadụ na-ekwurịta okwu, anyị ekwesịghị ịna-ekwu naanị gbasara ihe anyị mere ma ọ bụ ihe ùgwù ndị anyị nwere. (Ilu 27:2) Kama, anyị kwesịrị ịgba mbọ hụ ebe ụmụnna anyị na-eme nke ọma ma jaa ha mma maka àgwà ọma ha, nkà ha, na ihe ha rụrụ. (Ilu 15:23) Omume anyị. Ndị Kraịst dị umeala n’obi anaghị achọ ka ha bụrụ ndị a ma ama n’ụwa ochie a. Ha anaghị ebi ndụ okomoko, kama ha na-arụ ụdị ọrụ ndị mmadụ na-eleda anya ka ha nwee ike iji ike ha niile na-ejere Jehova ozi. (1 Tim. 6:6, 8) Ụzọ kacha mkpa anyị ga-esi egosi na anyị dị umeala n’obi bụ ịna-erube isi. Ọ bụ ịdị umeala n’obi ga-eme ka anyị ‘na-erubere ndị na-edu ndú’ n’ọgbakọ isi ma na-eme ihe nzukọ Jehova gwara anyị mee.—Hib. 13:17.
JIZỌS NWERE ỌMỊIKO
11. Gịnị bụ ọmịiko?
11 Gịnị bụ ọmịiko? Ọmịiko so n’àgwà na-egosi na mmadụ nwere ịhụnanya. Ihe Baịbụl kwuru gosiri na Jehova na Jizọs nwere “obi ọmịiko,” “obi ebere,” na ịhụnanya dị ukwuu. (Luk 1:78; 2 Kọr. 1:3; Fil. 1:8) Otu akwụkwọ na-akọwa Baịbụl kwuru banyere ọmịiko, sị: “Mmadụ inwe ọmịiko apụtaghị naanị imetere ndị ihe na-esiri ike ebere. Kama, ọ pụtara ime ihe ga-egosi na ihe banyere ha na-emetụ anyị n’obi, nakwa na anyị chọrọ inyere ha aka ka ihe dịrị ha mma.” Ọmịiko bụ àgwà na-eme ka mmadụ mee ihe ga-abara ndị ọzọ uru.
12. Olee ihe gosiri na Jizọs nweere ndị ọzọ ọmịiko, oleekwa ihe ọmịiko o nwere mere ka o mee?
12 Olee otú Jizọs si gosi na o nwere ọmịiko? Ọmịiko Jizọs nwere na ihe ndị o mere. Jizọs nweere ndị ọzọ ọmịiko. Mgbe ọ hụrụ na enyi ya bụ́ Meri na ndị ha na ya nọ na-eru uju n’ihi ọnwụ nwanne ya nwoke bụ́ Lazarọs, ‘anya mmiri gbara ya’ n’ihu mmadụ niile. (Gụọ Jọn 11:32-35.) Ụdị ọmịiko ahụ o nwere nke mere ka ọ kpọlite nwa otu nwaanyị di ya nwụrụ mekwara ka ọ kpọlite Lazarọs n’ọnwụ. (Luk 7:11-15; Jọn 11:38-44) O nwere ike ịbụ na mkpọlite Jizọs kpọlitere Lazarọs n’ọnwụ mere ka o nwee olileanya ịga eluigwe. Ma, tupu mgbe ahụ, Jizọs nweere oké ìgwè mmadụ bịakwutere ya “ọmịiko.” Ọ bụ ya mere o ji “malite izi ha ọtụtụ ihe.” (Mak 6:34) Ihe a Jizọs kụziiri ha gbanwere ndụ ndị mere ihe o kwuru. O doro anya na ọmịiko Jizọs nwere abụghị naanị n’ọnụ, kama o mere ka o nyere ndị ọzọ aka.—Mat. 15:32-38; 20:29-34; Mak 1:40-42.
13. Olee otú Jizọs si gwa ndị ọzọ okwu ọma? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.)
13 Okwu ọma ya. Obi ọmịiko Jizọs nwere mere ka ọ gwa ndị mmadụ okwu ọma, nke ka nke, ndị a na-emegbu emegbu. Matiu onyeozi kwuru ihe Aịzaya dere banyere Jizọs, sị: “Ọ dịghị ahịhịa amị a zọturu azọtu ọ ga-agbaji; ọ gaghịkwa emenyụ owu oriọna nke na-achọ ịnyụ anyụ.” (Aịza. 42:3; Mat. 12:20) Otú Jizọs si kwuo okwu gbara ndị mmadụ ume, ya bụ, ndị yiri ahịhịa amị a zọturu azọtu ma ọ bụ owu oriọna nke na-achọ ịnyụ anyụ. Ozi ọma o kwusaara “ndị e tiwara obi” mere ka ha nwee olileanya. (Aịza. 61:1) Ọ gwara ‘ndị na-adọgbu onwe ha n’ọrụ na ndị e boro ibu dị arọ’ ka ha bịakwute ya. Ọ gwakwara ha na ha ‘ga-enweta ume.’ (Mat. 11:28-30) O mere ka obi sie ndị na-eso ụzọ ya ike na Chineke na-enwere onye ọ bụla na-efe ya ọmịiko, ma ndị nke dị nta, ya bụ, ndị ndị ụwa weere na e nweghị ihe ha bụ.—Mat. 18:12-14; Luk 12:6, 7.
ṄOMIE OBI ỌMỊIKO JIZỌS
14. Olee otú anyị ga-esi na-enwere ndị ọzọ ọmịiko?
14 Olee otú anyị ga-esi na-enwere ndị ọzọ ọmịiko otú Jizọs mere? Ọmịiko anyị kwesịrị inwere ndị ọzọ. Baịbụl gwara anyị ka anyị gbalịsie ike ‘yiri obi ọmịiko dị ka uwe,’ ọ bụrụgodị na anyị ebughị ya pụta ụwa. O so n’ihe Baịbụl kpọrọ mmadụ ọhụrụ Ndị Kraịst niile kwesịrị iyiri. (Gụọ Ndị Kọlọsi 3:9, 10, 12.) Olee otú ị ga-esi na-enwere ndị ọzọ ọmịiko? Meghee obi gị. (2 Kọr. 6:11-13) Mmadụ kọwara gị otú obi dị ya na ihe na-echu ya ụra, gee ya ntị nke ọma. (Jems 1:19) Chee otú ọ dị onye ahụ, ma jụọ onwe gị, sị: ‘Olee otú obi ga-adị m ma ọ bụrụ m ka ụdị ihe a mere? Gịnị ka m ga-achọ ka e meere m?’—1 Pita 3:8.
15. Gịnị ka anyị ga-eme iji nyere ndị yiri ahịhịa amị a zọturu azọtu ma ọ bụ owu oriọna na-achọ ịnyụ anyụ aka?
15 Ihe ọmịiko ga-eme ka anyị mee. Ọmịiko na-eme ka anyị na-emere ndị ọzọ ihe ga-abara ha uru, karịchaa, ndị dị ka ahịhịa amị a zọturu azọtu ma ọ bụ owu oriọna nke na-achọ ịnyụ anyụ. Olee otú anyị ga-esi nyere ha aka? Ndị Rom 12:15 kwuru, sị: “Soronụ ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá.” Ọtụtụ mgbe, ọ bụrụ na obi adịghị mmadụ mma, ihe e kwesịrị imere ya bụ inwere ya ọmịiko, ọ bụghị ịgwawa ya ihe o kwesịrị ime. E nwere otu nwanna nwaanyị nwa ya nwụrụ, ụmụnna akasie ya obi. Ọ sịrị: “Obi dị m ụtọ na ndị enyi m bịara soro m bee ákwá.” Otú ọzọ anyị ga-esi gosi na anyị nwere ọmịiko bụ imere ndị ọzọ ihe ọma. È nwere nwanna nwaanyị di ya nwụrụ chọrọ onye ga-arụziri ya ihe n’ụlọ ya? È nwere nwanna mere agadi e kwesịrị ịna-ebuga ọmụmụ ihe, ozi ọma ma ọ bụ ụlọ ọgwụ? Ọ bụrụgodị obere ihe ka anyị meere nwanna, o nwere ike ime ka ihe dịtụrụ ya mma. (1 Jọn 3:17, 18) Otú kacha mkpa anyị ga-esi gosi na anyị nweere ndị ọzọ ọmịiko bụ ịgbalịsi ike na-ezi ha ozi ọma. Ọ bụ otú kacha mma anyị ga-esi mee ihe ga-abara ndị chọrọ ịmụta eziokwu Baịbụl uru.
Ị̀ na-enwere ụmụnna gị ezigbo ọmịiko? (A ga-akọwa ya na paragraf nke 15)
16. Gịnị ka anyị ga-ekwu iji gbaa ndị dara mbà ume?
16 Okwu ọma anyị. Ọ bụrụ na anyị nweere ndị ọzọ ọmịiko, ọ ga-eme ka anyị na-akasi ndị ‘dara mbà’ obi. (1 Tesa. 5:14) Gịnị ka anyị ga-ekwu iji gbaa ụdị ndị ahụ ume? Otú anyị nwere ike isi mee ka obi dị ha mma bụ igosi ha na ihe banyere ha na-emetụ anyị n’obi. Anyị nwere ike iji obi anyị niile jaa ha mma ka ha mata na ha nwere àgwà ọma nakwa na e nwere ihe ndị ha na-emeta. Anyị nwere ike ichetara ha na ọ bụ Jehova mere ka ha bịakwute Ọkpara ya. N’ihi ya, o ji ha kpọrọ ihe. (Jọn 6:44) Anyị nwere ike ịgwa ha na Jehova anaghị echefu ndị ohu ya, bụ́ “ndị obi ha tiwara etiwa” ma ọ bụ “ndị e gburu mmụọ ha.” (Ọma 34:18) Okwu ọma anyị ga-akasi ndị dara mbà obi.—Ilu 16:24.
17, 18. (a) Olee otú Jehova chọrọ ka ndị okenye si na-emeso atụrụ ya? (b) Gịnị ka anyị ga-atụle n’isiokwu na-esonụ?
17 Ndị okenye, Jehova chọrọ ka unu na-emere atụrụ ya ebere. (Ọrụ 20:28, 29) Chetanụ na unu kwesịrị ịna-elekọta atụrụ ya, na-agba ha ume, na-emekwa ka obi ruo ha ala. (Aịza. 32:1, 2; 1 Pita 5:2-4) N’ihi ya, ọ bụrụ na okenye nwere ọmịiko, ọ gaghị na-eme ka ọ̀ bụ ya nwe ụmụnna ya, na-etiri ha iwu ma ọ bụ na-agwa ha okwu ga-eme ka obi na-ama ha ikpe ma ọ bụ na-amanye ha ime ihe ha na-agaghị emeli. Kama, ọ ga na-agbalị ka obi na-adị ha ụtọ. Obi ga-esikwa ya ike na ha ga-eji obi ha niile na-efe Jehova n’ihi na ha hụrụ ya n’anya.—Mat. 22:37.
18 Anyị ahụla otú Jizọs si gosi na ya dị umeala n’obi, nweekwa ọmịiko. Ichebara ihe ndị a echiche ga-eme ka anyị na-eso nzọụkwụ ya. N’isiokwu na-esonụ, anyị ga-atụle àgwà ya abụọ ọzọ magburu onwe ha, ya bụ, obi ike na nghọta.